Who were Bengali, so called Rohingya?: မင်းသားခေါင်းဆောင်း၏ နောက်ကွယ်
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စ၍ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် 'ကယ်ပါ၊ ယူပါ' တစာစာ အော်ငင်နေကြသော ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘင်ဂလီများ အဘယ့်ကြောင့် အင်အားတောင့်တင်းစွာ ယနေ့ ထိ ရပ်တည်နေနိုင်သတည်း။ သူရို့ ၏ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူတွေ ကြိုးကိုင်နေကြသနည်း။ ဤစာစုတွင် အကျဉ်းချုံး၍ တင်ြ­ပ ပါမည်။
၁၉၇၈ခုနှစ်၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်း အကြီးအကျယ် အထိနာသွားလေသော ဘင်ဂလီများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ကော့ဘဇာမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တောခိုပုန်းအောင်းကာ ဆက်လက် လှုပ်ရှားနေခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ခုနှစ်တွင် ယင်းဘင်ဂလီများသည် ရိုဟင်ဂျာ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အဖွဲ့အစည်း (Rohingya Solidarity Organization) ဟူသော အမည်ဖြင့် ပေါ်ပေါ်တင်တင် နိုင်ငံတကာ၏ အကူအညီကို တောင်းခံလာခဲ့သည်။ ၄င်းအဖွဲ့အစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ရခိုင်ဒေသအတွင်းတွင် ရှိနှင့်ပြီးသော ဘင်ဂလီများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ နောက်ထပ် ဝင်ရောက်လိုသော ဘင်ဂလီများအတွက် ညီညွတ်သော မူစလင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ဒေသတစ်ခု တောင်းဆိုရေးဖြစ်သည်။.
ထို့ နောက်တွင်မူ အနှီ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်ဂလီလက်နက်ကိုင်များသည် ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Harakat-ul-Jihad-ul-Islami (HuJI) ၏ အကူအညီဖြင့် အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အယ်လ်ကေဒါ (Al-Qaeda) အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀-၁၉၉၅အတွင်း အင်အား ၅၀၀၀ မျှ ရှိသော ဘင်ဂလီများသည် အယ်လ်ကေဒါများ စီစဉ်ပေးသော အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် သင်တန်းများကို သွားရောက်သင်ယူခဲ့ရုံမျှမက ၄င်းတို့ ထံတွင် ပစ္စည်းသယ်၊ မိုင်းရှင်း စသဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသေးသည်။.
အနှီ ရိုဟင်ဂျာ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအမည်ခံ ဘင်ဂလီ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းသည် ရခိုင်-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တလျှောက်တွင် လူမှောင်ခို၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခို၊ လက်နက်ခဲယမ်း မှောင်ခို စသဖြင့် တရားဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်များကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမျှမက နိုင်ငံတကာရှိ ၄င်းတို့ နှင့် ဦးတည်ချက် တူညီသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုလည်းကောင်း ၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီ စောင်မမှုဖြင့် ပါကစ္စတန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံများတွင် အလှူငွေ တောင်းခံခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း နှစ်ရှည်လများ ရပ်တည်ခဲ့ကြသည်။.
အရှင်းဆုံး ဆိုရသော် ရခိုင်ဒေသ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ရခိုင်လူမျိုးများ၏ လုံခြုံမှုအတွက် ထိုဘင်ဂလီများကို လုံးဝ လက်မခံသင့်ပါ။ မင်းသားခေါင်းဆောင်း၏ နောက်ကွယ် မှ သူရို့၏ ဇာတိမှန်၊ သရုပ်မှန်ကို သူရို့လုပ်ရပ်များက သက်သေပြပြီး ဖြစ်နေပါသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် ရခိုင်ြေ­မပေါ်တွင် ထင်ရာစိုင်းလာသူများက အမျိုးထိမှ မချိအောင်နာကာ 'တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး' ဟု ညောင်နာနာ ထအော်နေသံများက အလွန် ရယ်ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ ရခိုင်များ အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားများ၏ ဘဝ အေးချမ်းသာယာရေးအတွက် အနှီ ဘင်ဂလီများ၏ သရုပ်မှန်ကို နီးစပ်ရာ ချစ်မိတ်ဆွေများကို လက်တို့သင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ မိတ်ဆွေ ... သင့်ရှေ့တွင် share ခလုတ်လေး ရှိနေပါသည်။ ညီညီညာညာ နှိပ်လိုက်ကြပါစို့ ။
Facebook: Qing Minya
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 2:11 PM